Engineering Medical - Luoyang zakha Tungsten-Molybdenum Material Co., Ltd.
Izixhobo zabo X-reyi kwaye tomographs ikhompyutha, abenzi isixhobo zonyango babeka ithemba labo anodes zethu zokubhala kunye neethagethi X-ray eyenziwe TZM, MHC, Tungsten-oluLula aluminium kunye Tungsten-ubhedu. Amacandelo ethu tube kunye tshin, umzekelo ngohlobo rotors, sithwele amacandelo, iindibano cathode, emitters collimators CT kunye shieldings, ngoku kukho inxalenye ngokuqinileyo emisiweyo imifanekiso yobuchopho diagnostic mihla.
radiation X-ray kwenzeka xa electron ukuba yehla yaya kwi anode. Noko ke, 99% e-eneji ngegalelo aguqulwa abe bubushushu. iintsimbi zethu ukumelana amaqondo obushushu aphezulu nokuqinisekisa ulawulo oluthembekileyo thermal ngaphakathi kwinkqubo X-ray.
n intsimi radiotherapy siya kunceda kwakhona amashumi amawaka kwizigulane. Apha, ngobuciko ngokupheleleyo nomgangatho umnqwazi kubalulekile. collimators zethu multileaf kunye shieldings wenziwa ingakumbi kwentsunguzi Tungsten-heavy ingxubevange metal Densimet® musa ukuphambukiswa millimitha kule njongo. Bathi ziqinisekise ukuba kwimitha swi ngendlela yokuba iwela inyama enesifo ngokuchanileyo ngokukhomba. Yamathumba abakhuselekanga ophezulu-ngqo zokukhanya ngoxa ephilile kuhlala ukhuselekile.
Xa kufikwa kwintlalo yabantu, sithanda ukuba alawule ngokupheleleyo. chain yethu imveliso akuqali ukuthengwa zentsimbi kodwa ekunciphiseni izinto eluhlaza ukuba ibe ngumgubo metal. Kuphela ngale ndlela nga sibe siyiphumezile enyulu izinto eziphakamileyo oluphawula iimveliso zethu. We ze yakhe components ebuntsimbi indawo evela okusilelayo ngumgubo amazwe. Ukusebenzisa iinkqubo ezizodwa ezenza kunye namanyathelo processing ngomatshini, kwakunye nemeko-of-the-art ukutyabeka kunye nokuzimanya technologies, sijonga komnye ezi zibe kumacandelo entsonkothileyo ubuninzi performanceand ekumgangatho obalaseleyo.
Molybdenum Sheet, Molybdenum Intonga, Tzm Sheet, Molybdenum Plate, Molybdenum, Tzm Plate,